China Sodium Bromide Kugadzira uye Fekitori | Musoro
Chirungu Zita: Sodium Bromide
Mamwe mazita: Sodium Bromide, Bromide, NaBr
Kemikari fomula: NaBr
Molecular Kurema: 102.89
CAS nhamba: 7647-15-6
EINECS nhamba: 231-599-9
Kugadzikana Kwemvura: 121g / 100ml / (100℃), 90.5g / 100ml (20℃) 
S Kodhi: 2827510000
Main zvemukati: 45% mvura; 98-99% yakasimba
Chitarisiko: White sekristaro upfu
Kugadzikana Kwemvura: 121g / 100ml / (100 ℃), 90.5g / 100ml (20 ℃) ​​
Panyama uye makemikari pfuma
1) Zvivakwa: Isina mavara cubic kristaro kana chena granular upfu.Iyo isina hwema, ine munyu uye zvishoma inovava.
2) Kuwedzera (g / mL, 25 ° C): 3.203;
3) Nzvimbo yakanyunguduka (℃): 755;
4) Nzvimbo yekubikira (° C, kumanikidzwa kwemhepo): 1390;
6) Flash poindi (° C): 1390
7) Solubility: inonyungudika nyore mumvura (solubility iri 90.5g / 100ml mvura pa20 ° C, solubility iri 121g / 100ml mvura pa100 ° C), iyo mhinduro yemvura haina kwayakarerekera uye inoitisa. acetonitrile, acetic acid.
8) Mhute kumanikidza (806 ° C): 1mmHg.
1) Anhydrous sodium bromide makristasi anodonhedza mune sodium bromide solution pa51 ℃, uye dihydrate inoumbwa kana tembiricha yakadzika kupfuura 51 ℃.
2) Sodium bromide inogona kutsiviwa neklorini gasi kupa bromine.
3) Sodium bromide inopindirana nesururic acid yakasungirirwa kuti ibudise bromine, ndokuti, pasi pekuita kwesimba rakasanganiswa yeacidizing, sodium bromide inogona kusanganiswa uye isina bromine.
2NaBr + 3H2SO4 (yakamisikidzwa) = 2NaHSO4 + Br2 + SO2 ↑ + 2H2O
4) Sodium bromide inogona kuita nekudzora sulfuric acid kuti ibudise hydrogen bromide.
5) Mune aqueous solution, sodium bromide inogona kuita nesirioni ions kuti igadzire yero solid sirivheri bromide.
Br - + Ag + = AgBr yasara
6) Electrolysis yesodium bromide mune yakanyungudutswa mamiriro kuti ibudise bromine gasi uye sodium simbi.
2 simba nabr = 2 na + Br2
7) Sodium bromide aqueous solution inogona kuburitsa sodium bromate uye hydrogen ne electrolysis.
8) Organic reaction inogona kuitika, senge iko kuita kukuru kuita bromoethane:
Sodium Bromide Magadzirirwo:
Yakajeka, isina ruvara kune yero yero
Munhu akaidza (sezvo NaBr)%
Munhu akaidza (sezvo NaBr)% ≥
Sulphates (se SO4)%≤
PH (10% mhinduro pa25 degree C)
1) Maindasitiri nzira
Iyo bromine yakanyanyisa kuwedzerwa inowedzerwa zvakananga kune yakazara sodium sodium hydroxide thermal solution yekugadzira musanganiswa we bromide uye bromate:
Iko kusanganiswa kunoitwa kuti ive yakaoma, uye zvakasara zvakasara zvakasara zvinosanganiswa ne toner uye inopisa kuti ideredze bromate kuita bromide:
NaBrO3 = NaBr + 3 c + 3 co nyora
Pekupedzisira, inonyungudutswa mumvura, ndokusefetwa uye ikamiswa, uye ndokuomeswa pa110 kusvika 130 degrees Celsius.
* Iyi nzira ndiyo nzira yakajairika yekugadzirira bromide ne bromine uye inowanzo shandiswa muindasitiri.
2) Neutralization nzira
Shandisa sodium bicarbonate sechinhu chisina kugadzirwa: nyungudutsa sodium bicarbonate mumvura, uye wozoisa simba pamwe ne35% -40% hydrobromide kuti uwane sodium bromide solution, iyo yakaumbiridzwa uye kutonhodza kudzora sodium bromide dihydrate. Firita, nyungudza iyo dihydrate nediki shoma yemvura, donhedza bromine mvura kudzamara ruvara rwe bromine ruchingooneka. Pisa, shongedza mune aqueous mhinduro yehydrogen sulfide, uye uuye kumota. Pakutonhora kwakanyanya, anhydrous crystallization precipitates, uye mushure mekuomesa, inoendeswa kune yakaoma uye yakachengetwa pa110 kweawa rimwe.Iyo inobva yatonhodzwa mune yakaoma ne calcium bromide desiccant kuwana anhydrous sodium bromide (reagent grade).
Reaction musimboti: HBr + NAHCO ₃ → NaBr + CO2 ↑ + H2O
Iine 40% yemvura alkali senge mbishi zvinhu: isa hydrobromide acid mukati mekupindura poto, pasi pekuramba uchikurudzira, zvishoma nezvishoma wedzera 40% yemvura alkali mhinduro, isa simba kune pH7.5 - 8.0, ita kuti ubudise mhinduro ye sodium bromide. centrifuged uye yakasvinwa mukati meinodzora sodium bromide mhinduro yekuchengetera tank.Ipapo kupinda mumhute tangi musungwa, wepakati kudyisa 1-2 nguva, kune yakatarwa giraidhi ye1. 55 ° Iva kana zvakadaro, centrifugal kusefa .Ipapo yakamanikidzwa kupinda iyo crystallization tangi, mune inomutsa kutonhora crystallization, uyezve iko crystallization yekuparadzanisa centrifugal, iyo yakapera product.The amai doro rinodzoserwa kune rinodzora sodium bromide emvura yekuchengetera tangi.
Reaction musimboti: HBr + NaOH → NaBr + H2O
3) nzira yekudzora yeUrea:
Mune tangi realkali, iyo soda inonyungudutswa mumvura inopisa panopisa zve50-60 ° C, uyezve urea
inowedzerwa kuputsa 21 ° Iva mhinduro.Ipapo kupinda mukuderedza kuita kwehari, zvishoma nezvishoma kuburikidza ne bromine, kudzora maitiro tembiricha ye 75-85 ° C, kune iyo pH ye6-7, ndiko kuti, kusvika kumagumo ekuita, misa bromine uye unomutsa, tora sodium bromide mhinduro.
Chinja pH kusvika 2 nehydrobromic acid, wozo gadziridza pH kusvika 6-7 ine urea uye sodium hydroxide kubvisa bromate. Mhinduro yacho inopisa kumota uye mhinduro yakaguta ye barium bromide inowedzerwa pa pH6 - 7 kubvisa sulfate Kana bhari yemunyu yakanyanyisa, sanganisa sulphuric acid inogona kuwedzerwa kubvisa.Wedzera yakaomeswa kabhoni kune izvo zvinoitika zvinhu mushure mekubvisa tsvina, woiisa kwemaawa 4-6. Mushure mekunge mhinduro yajekeswa, inosvinwa, inopwa nemhepo kumhepo, uye iyo yepakati zvinhu zvinozadzwa kanoverengeka. Mira kudyisa kwemaawa maviri pamberi pekristallisation Chinja pH kusvika 6-7 1 awa pamberi pe crystallization.Sodium bromide yakaparadzaniswa ikaomeswa mu rotary drum dryer.
Nhungamiro yekuita: 3Br2 + 3Na2CO3 + NH2ConH2 = 6NaBr + 4CO2 ↑ + N2 ↑ + 2H2O
1) Inonzwisisika indasitiri yekugadzirira kwefirimu sensitizer.
2) mukurapa kwekugadzirwa kwe diuretics uye sedatives, anoshandiswa kurapwa kweiyo neurasthenia, kushaya hope kushaya hope, kufara kwepfungwa, nezvimwewo Sedatives dissociate bromide ions mumuviri uye ine hunyoro hwekudzivirira hutachiona pane yepakati tsinga system, kudzikamisa vasina kugadzikana uye huku inofara, inobatwa nyore mukati, asi yakaburitswa zvishoma zvishoma, inoshandiswa kudzikisira kushungurudzika kwehuku kunokonzerwa nezvinhu zvakaita sekufambisa makwai, beaking, jekiseni remishonga, kubaiwa, kutora, kuunganidzwa kweropa kana chepfu yemishonga.
3) Inoshandiswa kugadzirwa kwezvinhu zvekugadzira zvinonhuwira muindasitiri yekunhuhwirira.
4) rinoshandiswa se brominating mumiriri mukudhinda uye kudhaya indasitiri.
5) Inoshandiswawo kutsvaga kutsunga kwekadhimiamu, kugadzirira sipo ye otomatiki dhishi rekushambidza, kugadzira bromide, organic synthesis, mafoto mahwendefa zvichingodaro.
Iva nemakore anopfuura gumi nemashanu ruzivo rwehunyanzvi mukugadzirwa kweSodiium Bromide;
1. Inofanirwa kuchengetwa munzvimbo yakaoma, inotonhorera uye ine mweya wakanaka.Kudzivirira kuburitswa nezuva, uye moto uye kupisa kwakazvimiririra, kwete neammonia, okisijeni, phosphorus, antimony powder uye alkali mune yakazara kuchengetedza nekufambisa. Wood machipisi, shavings uye mashanga anofanirwa kuchengetwa kuti arege kutsva.
2. Kana paita moto, jecha uye kabhoni dhayokidhi zvinodzimisa moto zvinogona kushandiswa kudzima moto.
Pashure: Sodium Sulfite
Zvadaro: Sodium Hydrosulfite
Karusiyamu Bromide Anhydrous
Karusiyamu Bromide Liquid
Karusiyamu Bromide Solution
Karusiyamu Bromide Liquid, Hydrosulfite De Sodium, Karusiyamu Bromide Solution, Karusiyamu Bromide Anhydrous, Hydrosulfite, Natrium Hydrosulfite,